တိုခဲရှီ (သို့မဟုတ်) ထက်မြနေတဲ့ ဓါး -
တိုခဲရှီ (သို့မဟုတ်) ထက်မြနေတဲ့ ဓါး
Posted on အောက်တိုဘာ 28, 2019 by Editor Min Oakar
ဂျပန်ပီပီ မြန်မာနှင့်ပက်သက်ရင် သဘောကောင်းတယ် လက်သီးပြင်းတယ်။ အလှူအတန်း ပရဟိတ​များနဲ့ သဒ္ဒါစိတ်ရှိပြီး ရဲရင့်တဲ့ ဆိုင်ထိုးပြိုင်ထိုးသတ္တိက Berserker Tokeshi ကို မြန်မာ့လက်ဝှေ့လောကမှာ ထွန်းတောက်လာစေခဲ့ပါပြီ။ 75Kg သူ့ကိုယ်အလေးချိန်အပြည့် အားပါတဲ့ လက်သီးတွဲတွေဝင်လာရင် လက်သီးပွဲ အော်နေတတ်တဲ့ အရပ်က လက်သီးသမားတွေ အထိနာကုန်တာဟာ ရင်မချိစရာပါပဲ။ ရိုးရှင်းတဲ့ လက်သီးတွေ ဖြစ်ပေမယ့် ပြိုင်ဘက်ကို ခုခံဖို့ ခက်ခဲစေတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က အမြတ်ထုတ်ဖို့သက်သက်မဟုတ်ဘဲ အလျော်အစားရဲတဲ့ သတ္တိကြောင့်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ အရှောင်အရွှေ့ထက် ဆိုင်ထိုး ပြိုင်ထိုးအကြိုက် မြန်မာ့လက်ဝှေ့ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်ပြီး တပွဲပြီး တပွဲနွှဲလာလိုက်တာ ခုဆို (15) ပွဲမြောက် တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ နိုဝင်ဘာ (3) ရက်နေ့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်မားဆုံး နေရာမှာ မြန်မာပထမတန်းတူးတူးနဲ့ တွဲရှိနေခြင်းသည်ပင် တိုခဲရှိရဲ့ အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်လို့ လက်ခံရတော့မှာပါပဲ။
ဆိုင်ထိုးပြိုင်ထိုးဖို့ အသဲကောင်းရုံနဲ့ ခုလောက် ထင်ရှားလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခြေကန်ရင် ဆိုင်ထိုးပြိုင်ထိုးဆိုတဲ့ လက်ဝှေ့သမားတွေ လဲပြိုကုန်တယ်။ အလဲထိုးနိုင်ပွဲ စွမ်း ဆောင်ရည် ရှားပါးလာနေတဲ့ လက်ဝှေ့သမားတွေကြားမှာ သူဟာ ရှားရှားပါးပါး (14) ပွဲကစား (6) ပွဲအလဲထိုးပိုင်ရှင် ဂျပန်လူမျိုး လက်ဝှေ့သမား ဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ပါဦး (၁) မင်းထက်အောင်၊ (၂) ဂေါ်မူတို ၊ (၃) ထွန်းမင်းလတ် ၊ (၄) ရှမ်းကို ၊ (၅) မင်းမောင်မောင်၊ (၆) အောင်ခိုင် တို့ဆိုတာ တိုခဲရှိရဲ့ နည်းစနစ်ကြောင့်လား ပြင်းအားကြောင့်လား တားဆီးဖို့ခက်ခဲတဲ့ သံမဏိစိတ်ဓာတ်အသဲကြောင့်လား အဖြေရှာမရစဉ်မှာပဲ သေချာတာကတော့ (၆) ဦးရှုံးခဲ့ကြပါပြီ။ မာပါတယ်ဆိုတဲ့ ဘိလပ်မြေစက်ရုံသား အောင်ခိုင်ကို ထင်ရှားတဲ့ ပြီးလုံးဘယ်ခြေနဲ့ပဲ ကန်ခဲ့တာ နောက်ဆုံးသက်သေပါ။ ဒီကန်ပေါက်တပေါက်က ရှင်းလင်းပေမယ့် ကြိုးဝိုင်းစစ်တလင်းထဲရောက်ရင် လျှို့ဝှက်နက်နက်စွာပဲ ဒါကို မကာကွယ်နိုင်ကြတော့ဘူး။ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ ? မြန်မာပြည် ပထမတန်းဆီအရောက် အလှည့်ကျ နှိုင်းယှဉ်ခံရသည်မို့ နဂါးမာန်တူးတူးက ဒီမေးခွန်းကို အဖြေညှိရပါတော့မယ်။
ဖျံသွေးကို ပွဲပြတ်သွားအောင်ကန်ခဲ့သူ ဒဲရစ်စန်းထယင်း(ထိုင်း) ကို ဖားအံမှာ တူးတူးနှင့်တည်တော့ ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီး အချိန်တိုတွင်း ငြိမ်သက်သွားတာ မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ တိုခဲရှိက ဒဲရစ်ထက် လက်ဝှေ့သမိုင်းအများကြီး သာလွန်ကောင်းခဲ့ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာ့ခေါင်းသတ်ကွက်ကို မွေထိုင်း ခံခဲ့ရသော်လည်း တိုခဲရှိတို့လူမျိုးက အလွန်နှစ်သက် ကျင့်သုံးနိုင်တာကြောင့် ဂျပန်ကို မွေထိုင်းနှင့် ပမာပြုဖို့ သင့်မသင့် ချင့်ချိန်ရပါလိမ့်မယ်။ တိုခဲရှိတို့ လူမျိုးက မျက်နှာသွေးထွက်ရင် တစမ်းစမ်းနဲ့ အလှပျက်ပြီလား ကြောက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဗျဂ္ဃကို ရန်ကုန်အရောက် နယ်ကျွံထိုးခဲ့တဲ့ ဟီဂါရှိဆိုရင် သွေးနှင့်ရင်းပြီး မြန်မာတွေကို သူ့လူ ကိုယ့်ပရိသတ်လုပ်ပြခဲ့သေးတာ မဟုတ်လား။
မင်းထက်အောင်ကို နားအုံတင်ချိတ်ပြီး ကန်လှဲခဲ့တဲ့ တိုခဲရှိအမြင့်ခတ်များ၊ ဂေါ်မူတိုကို လဲကျစေခဲ့တဲ့ သန်စွမ်းအားပါလှတဲ့ ဘယ်ဝိုက်ပင့်လက်သီးများ၊
စောမင်းအောင်(တောင်ကလေး) ကို အထိနာစေခဲ့တဲ့ အသဲတချက် နားအုံတချက် ရှင်းလင်းတဲ့ထိချက်များ၊ တောင်ကလေး မင်းမောင်မောင်တို့ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ အောင်ခိုင်တို့ကို ပြိုကျစေခဲ့တဲ့ အသဲဦးတည် ဘယ်ခြေပြင်းများ၊ တဖျပ်ဖျပ် ပြန်မြင်ယောင်ရင်း မောင်တူးနှင့်တွေ့တဲ့အခါ ဆိုရင် ….။ ဒီလို အတွေးစလိုက်တာနဲ့ မြန်မာလက်ဝှေ့ပရိသတ်များအတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှု အပြည့် ပေးစွမ်းနေပါပြီ။
တိုခဲရှိရဲ့ အနိုင်ရလာဒ်တွေကို သိရအပြီးမှာတော့ သရေ ရလာဒ်တွေကို ပြန်ကြည့်ကြပါမယ်။ တိုခဲရှိဟာ စောမင်းအောင်(တောင်ကလေး) ကို နှစ်ကြိမ်စလုံး သရေသာ စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ စိုးထက်ဦးကိုလည်း သရေသာရခဲ့ဖူးပြီး ရန်နိုင်အောင်ကို တကြိမ်ရှုံး တကြိမ်သရေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရာမာဉ်နှင့် စောဆာဝါးတို့ကိုလည်း တိုခဲရှိဟာ ပူးတွဲသရေပါပဲ ။ ဒီနေရာမှာ တိုခဲရှိရဲ့ ရှုံးပွဲတွေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာပါပြီ။ တိုခဲရှိရဲ့ ရှုံးပွဲနှစ်ပွဲဟာ တကယ့်ကို တိုခဲရှိရဲ့ တက်လမ်းအစပါပဲ။ Lethwei in Japan (4) ပွဲစဉ်မှာ ဖျံသွေးရဲ့ လက်ချက်ကြောင့် ဒဏ်ရာကြီးပြီး ဒိုင်ပွဲရပ် ကွဲရှုံးပါ။ ဖျံသွေးနှင့် နင်လားငါလား အပြိုင်ကြမ်းခဲ့တဲ့ ပွဲကောင်းလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Lethwei in Japan (5) ကတော့ ရန်နိုင်အောင်(တောင်ကလေး) ရဲ့ ပိုင်နို်ငကျွမ်းကျင်တဲ့ ခေါင်းတိုက်ချက်အောက်မှာပဲ တိုခဲရှိဟာ ဒုတိယကြိမ် ဆေးရှုံးပဲ ဖြစ်ပြန်တယ်။ ဗိုင်းကနဲ လဲနေအောင် အနိုင်ယူဖို့ ခက်ခဲတဲ့သူဟာ ဧကန်စင်စစ် Berserker (လူကြမ်းကြီး) ” တိုခဲရှိ ” မှ တိုခဲရှိပါပဲ။
အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ရှုံးပွဲတွေဟာ ဝေဝါးသွားလို့ ခုဆိုရင် Lethwei in Japan ပွဲစဉ် Series က (14) ထိရောက်ခဲ့ပြီပေါ့ ဒါကြောင့် သူ့ရှုံးပွဲဟာ တိုခဲရှိအတွေ့အကြုံ နုစဉ်ကလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ရှုံးပွဲများနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျ သိမ်ငယ်တတ်သူသာဆိုရင် နိုဝင်ဘာလ (3) ရက်နေ့ရဲ့ Air KBZ Fight (6) ခေါင်ပွဲစဉ်မှာ တိုခဲရှိ လက်ခမောင်းခတ်နေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ လေးလေးစားစား ပြောချင်မိပါတယ်။ ဘယ်ခြေခင်းနဲ့ ဘယ်ခြေပြင်းကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် လေ့ကျင့်ထားသူ၊ ညာခင်းပြိုင်ဘက်တွေကို ထိုးကွက်စွပ်နေအောင် လှုပ်ရှားကန်ချနိုင်သူ တိုခဲရှိဟာ ခုဆို တလက်လက်ထနေတဲ့ ယုံကြည်မှုများနဲ့ အမြဲခုတ်နေတဲ့ ဓားသွားပမာ ထက်မြနေပါပြီ။
ရှုံးဖို့ နာဖို့မတွေးသော တိုက်ခိုက်ရေးသမားတိုင်းမှာ မမြင်နိုင်သော တားဆီးမရနိုင်သော သူတို့ သတ္တိက ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ သင်စရာ နည်းစနစ်မရှိတဲ့ ပကတိသတ္တိတစုံနဲ့ တိုခဲရှိကတော့ မြန်မာပြည်ကို တတိယအကြိမ် ချီတက်လို့ လာပါလေပြီ။ သူ့ရဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ ဘယ်ခင်းလက်နက်များ နည်းစနစ်ကျင့်စဉ်များ အနိုင်ရရေး တိုက်ပွဲဝင်အစီအမံများ အပြည့် ထုပ်ပိုးလာမှာကတော့ သံသယရှိစရာမလိုလောက်ပါဘူး။
MLWC –4ပွဲစဉ်မှာ ဘရာဇီးလ်သား ” ဘာဘက်ဟာဂီ ” ကို အသာစီးရက်သားနဲ့ ကျအောင် မလုပ်ပြနိုင်ခဲ့လို့ ပရိသတ်ကို အားနာနေသူ တူးတူးအတွက် တိုခဲရှိဟာ ကြောက်စရာလား အခွင့်အရေးလားဆိုတာကတော့….
Posted in ဆောင်းပါး, ဆွေးနွေးခန်း, ပြည်ပသတင်း, သတင်း
၂၀၂၀ ထဲမှာ သွေးသစ်ဝင်းလှိုင် ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ပွဲ
ထွန်းထွန်းမင်း(မြန်မာ) နှင့် (ရုရှ) မစ်ခေးလ်ဗက်ထရီးလား
စောအယ်ဖူး(ကညောသွီ) နှင့် (တော်ဝင်ဧရာ) သန့်ဇင်